Markii aad daawato viidiyowgaan, waa in aad ka fekerto jawaabtii aad ka bixin laheyd su’aalaha soo socda:
Laga soo bilaabo sanadihii sagaashameeyadii illaa iyo haatan wax badan ayaa iska bedelay dalkan Finland. Maxay kula tahay go’aamada am arimaha la gaarey ee Finland ka dhigay wadan casri ah?
Dadka noloshooda xitaa wax badan ayaa iska bedelay. Haddaba isbedelkaan sidee ayuu uga muuqdaa dhinacayada howl-maalmeedka nolosha, iskuulka iyo shaqadaba?
Maxay ahaayeen arimihii ugu muhiimsanaa ee Finland ka dhacey intii u dhaxeysay sannadihii 1990-2000, qaabkee ayay arimahaasi wax uga bedeleen nolosha bulshada Finland?
Sidee baad u aragtaa taariikh ahaan waxyaabaha ay wadaagaan ama ku kala duwan yihiin Finland iyo dalkaaga?